राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन शुरु : प्रतिष्पर्धामा विद्यादेवी र लक्ष्मी - AJAMBARI
२ श्रावण,२०७५|Jul 23, 2018
५ असार,२०७५038
६ असार,२०७५036
६ असार,२०७५030
६ असार,२०७५051
५ चैत्र,२०७४0207
२ फाल्गुन,२०७४0211
७ फाल्गुन,२०७४0203
६ फाल्गुन,२०७४0237
६ फाल्गुन,२०७४0244
५ चैत्र,२०७४0147
४ चैत्र,२०७४0185
५ चैत्र,२०७४0189
५ चैत्र,२०७४0262
६ फाल्गुन,२०७४0200
४ जेठ,२०७५038
४ जेठ,२०७५040
४ जेठ,२०७५044
४ जेठ,२०७५041
६ जेठ,२०७५053
४ जेठ,२०७५062
४ चैत्र,२०७४0180
१ फाल्गुन,२०७४0225
क्यान्सरसँग जुधिरहेकी सोनाली बेन्द्रलेले न्यूयोर्कबाट...
४ असार,२०७५029
आफ्नै आवाजमा तायाहाङमा आफै फिचरिङ (भिडियो)
४ असार,२०७५023
मुलुक साच्चिकै समृद्धितिर लम्किदैछ !
४ असार,२०७५021
आलियाले गरिन् रणबीरको अभिनयको तारिफ
१ असार,२०७५068
६ चैत्र,२०७४0476
५ चैत्र,२०७४02497
३ फाल्गुन,२०७४0227
२ असार,२०७५085
५ असार,२०७५030
२ असार,२०७५032
६ असार,२०७५028
७ जेठ,२०७५033
३ असार,२०७५025
३ असार,२०७५021
१ असार,२०७५019
१ असार,२०७५024
६ असार,२०७५0193
३ जेठ,२०७५035
५ चैत्र,२०७४0180
३ फाल्गुन,२०७४0209
३ फाल्गुन,२०७४0202
६ फाल्गुन,२०७४0227
७ जेठ,२०७५036
६ जेठ,२०७५050
५ चैत्र,२०७४0157
१ फाल्गुन,२०७४0488
७ फाल्गुन,२०७४0224
३ फाल्गुन,२०७४ 175 0
काठमाडौँ - मंगलबार आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा तर्फबाट सांसद जिपछिरिङ लामा र प्रदेश सभातर्फबाट दामा शर्माले पहिलो मतदान गरेको बुझिएको छ ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कायम गरिएको मतदान केन्द्रमा आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
मुलुकमा तेस्रो पटक हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वसांसद कुमारी लक्ष्मी राई दुवै भोजपुरका प्रतिष्पर्धामा छन् । गणतन्त्र नेपालले डा. रामवरण यादव र भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका रुपमा पाइसकेको छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका ६६६ सांसदको समर्थन वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा रहेकाले उनको पक्षमा मत ३९ हजार ७०९ देखिएको छ । संविधानअनुसार विजय हुन कम्तीमा ५० प्रतिशत कटाउनुपर्छ जुन २६ हजार ३४४ मत हो ।
उता, कांग्रेस उम्मेदवार लक्ष्मी राईका पक्षमा काँग्रेसका १८९ सांसदको समर्थन रहेकाले उनको पक्षमा ११ हजार ४२८ मत रहेको देखिन्छ छ । बाँकी मत भने १० ओटा साना दलको रहेको छ । उनीहरूको मत एक हजार ६४९ छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभाका ३३१ र प्रदेशसभाका ५४९ सदस्य गरी ८८० मतदाता कायम गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सांसदको मतभार ४८ रहेको छ । कुल मतदाता संख्या ८८० भएकाले जम्मा मतभार ५२ हजार पाँच सय रहेको छ ।
सांसद रेशमलाल चौधरीका साथै पछि शपथ लिएका राष्ट्रिय सभाका तीन सांसदले भने मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रुपमा रहने तथा पदावधि निर्वाचत भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
विश्वकप क्रिकेट छनोटमा नेपालको पहिलो जित, हङकङ पाँच विकेटले पराजित
पुरुषको यस्तो बानीले बनाउँन सक्छ नपुंसक !
४ जेठ,२०७५050
४ जेठ,२०७५042
बेलायतमा गणतन्त्रको सपना देख्नेहरु
२ जेठ,२०७५054
‘आप्पा’मा दयाहाङ र तुलसी सँगै
५ बैशाख,२०७५082
३ असार,२०७५04729
४ चैत्र,२०७४02837